Your computer, casriga ah, kiniin ah, ama fiidiyo kuu ogolaanayaa inaad si ay u abuuraan video YouTube ah siyaabo caadi ah oo aan caadi ahayn. In this article waxaad ku baran doontaa talaabooyin fudud ku saabsan sida loo abuuro, edit, iyo geliyaan ah video caadiga ah YouTube. Waxa kale oo aad baran doontaa sida loo abuuro PowerPoint ah in YouTube video, video ah oo aamusnaan ah, sawirka si YouTube video, isku dhafan clips video, iyo geliyaan MP3 la background image ah.
Samee video YouTube ah in hab caadiga ah
Sida ugu caadiga ah si ay u abuuraan video YouTube ah waa in la isticmaalo qalab aad si ay u qoraan, edit, iyo geliyaan. Raac tallaabooyinkan fudud in ay sidaa sameeyaan.
1. Dooro Your Device (casriga ah, Computer, Tablet, ama fiidiyo) - Dooro qalabka aad jeclaan lahayd in aad isticmaasho si aad video. Qotomiyey oo ay bilaabaan duubista. Waxaad u baahan doontaa in aad raacdo tilmaamaha lagu duubo bixiyaan saaraha ah qalab aad u.
2. Edit Your Video - Isticmaal software tafatirka video ah, sida YouTube Video Editor, Windows Movie Kan sameeyey, ama iMovie. Raac tilmaamaha ay bixisay software video tafatir ah.
3. geliyaan Your Video - Waxaad u baahan doontaa inaad gasho si aad xisaabta YouTube inay geliyaan aad video. Marka aad login guji badhanka Upload iyo raac tilmaamaha.
Fiiri this YouTube video cajiib ah u abuuray by ah camera video / fiidiyo:
Raac tilmaamaha hoos ku qoran si ay u abuuraan video YouTube la PowerPoint.
1. In la abuuro PowerPoint bandhigid - fur codsiga PowerPoint aad, abuuri karto video iyo faylka badbaadiyo.
2. wadaag bandhigid PowerPoint - On computer Windows ah, kaliya File dooro, Share, File Noocyada, Abuur Video ah, file PowerPoint dooro, Save As ka dibna dooro Windows Media Video. Haddii aad qabto Mac ah, waxaad u baahan doontaa inaad isticmaasho QuickTime si loogu badalo aad bandhigidooda ah YouTube video socon.
3. geliyaan aad YouTube - fur xisaabtaada YouTube iyo geliyaan video ah.
Fiiri tan bandhig PowerPoint firfircoon:
Samee dhaceen Videos la Goanimate iyo Xtranormal
Codsiyada Goanimate iyo Xtranormal ogolaado in aad si aad u aamusnaan ah videos in aad dhoofin karto in YouTube.
Goanimate - In la abuuro kartoon ah videos for YouTube isticmaalaya Goanimate , waxaad saxiixi kartaa ay web site for free, laakiin waxaad u baahan doontaa inaad bil bil ama sannad kasta lagu bixiyo qorshaha.
Fiiri this video aamusnaan ah lagu qoslo abuuray by GoAnimate:
Xtranormal - Waxaad abuuri kara aamusnaan ah videos for YouTube la Xtranormal, laakiin waxaad u baahan doontaa inaad saxiixdo website-keeda si ay u helaan codsiga. Waa dhibcood ku saleysan iyo marka aad saxiixdo waxaad heli doontaa 300 dhibcood oo bilaash ah.
Fiiri this video kale oo aamusnaan ah lagu qoslo abuuray Xtranormal:
Samee Photos in la Video Wondershare Fantashow
Waxaad dynamically abuuri karaan sawiro si video la Wondershare Fantashow lacag la'aan ah. Waxaad codsiga si aad Windows ama Mac computer kala soo bixi kartaa. The version Lite waa bilaash, laakiin waxaad ka heli kartaa koonto premium ka yar $ 5 bil kasta.
Fiiri this runtii qurux abuurka Fantashow:
Samee Mixed Video Clips la Wondershare Filmora (asal ahaan Wondershare Video Editor)
Wondershare Filmora (asal ahaan Wondershare Video Editor) wuxuu kuu ogolaanayaa inaad si ay u abuuraan gaar video clips la saamaynta muuqaal ah.
Tani waxay sare software video tafatirka kuu ogolaanayaa inaad si ay u abuuraan isku dhafan videos isticmaalaya sifooyinka soo socda:
PIP (Picture in Picture) Resources
Intros iyo Credits
Fiiri this video abuuray by Wondershare Filmora (asal ahaan Wondershare Video Editor):
MP3 la Image Asalka ah
Haddii aad qabto file MP3 maqal ah la image asalka ah oo aad jeclaan lahayd in ay u geliyaan in YouTube, waxaad u baahan doontaa in la abuuro slideshow photo on YouTube .
1. Bogga Upload YouTube, ka dooro batoonka Abuur qaybta slideshow Photo.
2. Dooro sawiro la MP3 audio oo geliyaan.
Fiiri this video MP3 la background image:
Isticmaal habab caadi ah oo aan caadi ahayn inay si fudud oo dhaqso u hesho video on YouTube!
> Resource > Video > 5 Siyaabo ahayan in Samee Video YouTube ah